iMovie waa software video tafatirka ugu caansan diyaar u ah Mac. Waxay bixisaa tiro ka mid ah tas-hiilaadka in dadka isticmaala iyo aad si fudud ku rakibi kartaa Mac iyo sidoo kale qalabka ay ku jiraan arrimo iPad iyo iPhone. iMovie taageertaa tiro ka mid ah qaabab file ah oo aad si fudud u soo dhoofsadaan karo files ka qaabab kale. The qaabab file caan ah oo ay taageerayaan ku iMovie ka mid ah MPEG, MOV iyo MP4 qaar ka mid ah. Wixii fulinaya hawlaha qaarkood ku file video ah, in aad marka hore u baahan tahay si ay u dajiyaan galay iMovie ka dibna qaliin la doonayo. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira waqtiyo qaab faylka gaarka ah oo keliya diiday in laga keeno ee iMovie. In seenyada noocan oo kale ah, waxaad isku dayi kartaa file soo celiyaa qaab la file socon iMovie ka dibna mar kale soo dhoofsadaan.
Qaybta 1aad: Sida loo soo dhoofsadaan VOB in iMovie on Mac?
Qeybta 2: Maxaad file a video VOB aan la keeno karo in iMovie?
Haddii aad dhexda u galay xaalad ay iMovie kaliya diido in ay soo dhoofsadaan file VOB aad, markaas halkan waa workaround yar oo kaa caawin kara in aad si deg deg ah ku dhammayn lahaa hawshan. In xaaladood dhowr ah, iMovie diido in ay soo dhoofsadaan noocyada file qaarkood ay sabab u tahay farqiga u codec ay. Si looga hortago dhibaatadana, waxaad ka fekeri kartaa file dajisato video format Converter ah oo loogu badalo doonaa file VOB aad galay qaar ka mid ah iMovie qaab faylka la aqbali karo si aad si fudud u dajiyaan karaa.
Waxaa jira tiro ka mid ah converters video ee suuqa laakiin Wondershare Video Converter Ultimate for Mac waxaa loo tixgeliyaa sida ugu dhaqsiyaha badan oo ka mid ah ugu hufan! Wondershare Video Converter Ultimate for Mac Xambaarsan kalsoonida brand lagu kalsoonaan karo sida Wondershare. Its qaababka ugu sareysa uruursanayey talooyinka soo jiidata macaamiisha ah oo ka dhigaysa software ah in looga.
Muuqaaladan weyn ee Wondershare Video Converter Ultimate u Mac ka mid ah:
Taageerada tiro balaadhan oo ah qaabab file: software wuxuu taageeraa kala duwan oo ay ka mid yihiin qaabab file maqal ah, video iyo file DVD qaabab.
Diinta file Fast: Wondershare ee Video Converter Ultimate for Mac damaanad macaamiisheeda degdeg diinta sida ugu badan 30 jeer ka dhakhsi badan tartanka.
Iyada oo aan tayo badiyay Conversion: Mid ka mid ah qaababka ugu farxada badan ay bixiyaan Wondershare Video Converter Ultimate waa istaraatijiyad ay diinta ka sameecadda ah taas oo macnaheedu yahay in software ka badalo karaa qaabab file aan laga badinin tayada asalka ah ee files ah.
Maktabadda codec Buuxi: A maktabadda codec dhamaystiran ayaa la dhexgeliyey Wondershare Video Converter Ultimate for Mac si uu u sameeyo waxa ay taageero la baakadaha caanka ah software video tafatirka kale sida iMovie, CutPro iwm
Waxaad si fudud u soo bixi kartaa Wondershare Video Converter Ultimate for Mac oo wuxuu ku raaxaysan faa'iidadiisa. Software waxaa laga heli karaa maxkamad iyo version bixisay labada. Halkan waa tutorial yar stepwise in kugu hagi doona tallaabooyinka ka midka ah diinta aad file video VOB in qaab file socon iMovie:
Talaabada 1: Burcad software iyo dajiyaan faylka
Tallaabada ugu horeysay waa in aan bilowno Video Converter Ultimate for Mac Wondershare ee u double gujinaya ay icon. Marka interface software kor u furmay, waxaad ka arki kartaa tiro ka mid ah fursadaha. Si kastaba ha ahaatee si loogu badalo aad video, waxaad u baahan tahay in ay marka hore soo dhoofsadaan file video ka galay interface ka. Waxaad soo dhoofsadaan kartaa file video VOB midkood jiidayeen faylka si interface ama loo doorto "daro" button.
Talaabada 2: Dooro qaab file socon
Marka aad soo dhoofiyo file VOB video ee Wondershare Video Converter Ultimate for Mac, waxaad bilaabi kartaa habka diinta dhabta ah. Laga soo bilaabo tab qaab wax soo saarka, doortaan qaab file socon iMovie kasta. Tiro ka mid ah qaabab file sida MP4, AVI, iyo MPEG ayaa diyaar u ah diinta.
Tallaabo 3: U beddelaan file VOB ah qaab faylka la doonayo
Marka aad dooratay qaabka file la doonayo, hadda si deg deg ah aad bilaabi kartaa hawlaha qaab beddelidda adigoo gujinaya batoonka "badalo". Wondershare Video Converter Ultimate for Mac Lagu yaqaan in ay diinta ka xawaaraha sare iyo waxay qaadan doontaa oo keliya xoogaa daqiiqo ah si ay u buuxiyaan qaab beddelidda taas oo ku xiran ee video ah.
Talaabada 4: Import badaley file VOB in iMovie
Marka aad faylka diinta qaabka wax soo saarka la doonayo, file ka dhashay waa la badbaadin doonaa meel la cayimay. Si aad u dajiyaan file this ee iMovie, abuurtaan iMovie oo guji badhanka 'dejinta'.
Haddii aad la kulanto xaalad ay iMovie kaliya diido in ay soo dhoofsadaan file VOB video ah, ka dibna waxaa laga yaabaa inaad dhab ahaan u yaabsan sababta xagga dambe ka gaad. VOB waa qaab weel u DVD iyo qaab file aan la aqbali iMovie ah. iMovie taageertaa kaliya qaabab file u gaar ah sida MPEG-4, Mpg, Jabbuuti, TS iyo HDV. Taageerada qaab faylka gaarka ah ayaa lagu daray ay midayso codec, waayo, qaab gaar ah. Haddii codec ee qaab faylka gaarka ah uu maqan yahay, ka dibna format in si gaar ah la ma taageeri doonaa by iMovie. Sabab la mid ah ka dambeeya fashal ee soo dejinta VOB file video waa la'aanta ah ee is-dhexgalka codec habboon in iMovie.
5 talooyin iMovie 9 waxaad u baahan tahay inaad ogaato
> Resource > iMovie > Sida loo soo dejinta VOB in iMovie?